Ny ho avy amin’izay… | NewsMada
Ny ho avy amin’izay…
Vita! Tsy misy tokony hitodihana any amin’ny 10 taona lasa intsony. Niravona tamin’ny fomba demokratika ny krizin’ny 2009, satria efa lany ho filohan’ny Repoblika ara-panjakana Rajoelina Andry. Niarahaba sy nanaiky ny fandreseny, araka ny didin’ny HCC izay natrehiny Ravalomanana Marc…
Any amin’ny filoham-pirenena amin’izay ny baolina manomboka eto. Tia miasa haingana, ary nampanantena laharam-pahamehana maroloha izy, nandritra ny fampielezan-kevitra. Mitodika any aminy ny mason’ny Malagasy rehetra sy izao tontolo izao, manomboka eto. Efa nilaza rahateo fa filohan’ny Malagasy tsy ankanavaka Rajoelina Andry, ary vonona hanatanteraka ireo velirano izay efa nataony.
Samy niantso fitoniana sy filaminana amin’izay, na ny lany na ny tsy lany. Fahendrena mihoatra an’izany? Manoratra ny tantara Andriamatoa isany Rajoelina Andry sy Ravalomanana Marc. Misento avokoa ireo izay natahotra korontana sy krizy vaovao, aorian’ny valim-pifidianana.
Inona avy ny laharam-pahamehana? Anjaran’ny filoham-pirenena ny mamerina sy mamaritra izany indray. Inoana fa hozarainy amin’ny fotoana hanaovany ny fianianana io. Efa maro kosa ireo fangatahana, na avy amin’ny mpomba azy, na avy amin’ireo mpomba ny mpifaninana taminy.
Ireto ny tena niverimberina: ny fandriampahalemana, ny fahasalam-bahoaka, ny asa fihariana, ny ady amin’ny kolikoly, sns. Voaresaka anatin’ireo velirano avokoa ireo. Misy ny maika ary misy kosa ny tena maika amin’ireo. Manampy ireo anefa ny fihavanana, izay efa narefo dia narefo taorian’ny fifandonana ara-politika nivaivay teto.
Ny ho avy amin’izay… Asa amin’izay…